ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “အောက်စ လွတ်တဲ့အခါ”
ကြည့်ရဲဘူး....ဗျို့...။ ပြန်ပြုံးပြမှာ ကြောက်လို့..
ကဗျာလေးတွေ ကြိုက်တယ်ဗျာ။း)
ဟုတ်တယ် အမှန်တရားက ကွင်းကွင်းကြီးပေါ်နေတာတောင် လူအများစုက စိုက်မကြည့်ရဲကြဘူး။ အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေ..
ကျမ ဒါ ပထမဆုံး ကွန့်မင့်ရေးခြင်းဖြစ်တယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီကဗျာကို တော်တော်လေးကို နှစ်သက်ပါတယ်။
ဒီကဗျာကိုတော့ တော်တော်ကလေးကို သဘောကျသွားပါတယ်။
လွတ်ပြီလားဟင်...ကြည့်ချင်လို့ပါ...(အမှန်တရား ကို ပြောတာ သာဖြစ်ပါ၏ )
Mightie Paw! Bravo,Bravo,Bravo....................I stare ,see smth wo ta wa cos of reading blogs.I like ur poems.
သဘောကျတယ်ဗျာ...အတွေးကောင်း၊ အရေးကောင်း ကိုပေါ.... , အားကျ၏ :)
အမှန်တရားဟာ ကွင်းကွင်းကြီးပေါ်လာတယ်?
၇ှင်း၇ှင်း ကြီးပေါ်လာတယ်ဆို တော်သေး ..... (i) (i)
☀ အူယားသဲယားနဲ့ ထောက်ခံနေကြတာ .. . . .အားရစရာပါပဲ။
☀ အဲလိုထောက်ခံပြီးတော့ . . . . ဘာတွေ ဆက်လုပ်ကြမှာတုံး?
☀ ဒီအဆင့်ကနေ ဘယ်အဆင့်ကို . . . . တက်လှမ်းကြမှာလဲ?
☀ ဒီအဆင့်မှာ ကျောက်ချထားတာ . . .နှစ်ပေါင်း ၂၂ ကျော်ခဲ့ပါပြီ။
☀ နောက်တစ်ဆင့်ကို တိုးပြီးတက်ဖို့ မစဉ်းစားတော့ဘူးလား?
စိတ်ဆိုးကြနဲ့ဦး.. မသိလို့မေးနေတာဗျ။ သိချင်လို့ . . .မေးတာဗျ။ စိတ်ဝင်စားလို့မေးနေတာဗျ။ ဒါတွေကို အမြဲမြင်နေရတယ်ဆိုတော့ ငြီးငွေ့လာလို့ မေးကြည့်တာပါ။
လမ်းဟောင်းကို ဘိန်းစွဲသလို စွဲနေသူများကို ကလိထိုးနေသည့်
(p.s ဘာရည်ရွယ်ချက်မှ မရှိပဲ ရေလိုက်ငါးလိုက် အားပေး ထောက်ခံနေကြတာဆိုရင်တော့ ကျုပ်ရဲ့ စပ်စပ်စုစု မေးထားတာတွေကို ဖြေဖို့ မလိုပါဘူး)
Anonymous (September 21, 2010 11:28 AM ).......... ကြည့်ရဲဘူးဆိုပြီး မျက်နှာကိုကာထားတဲ့ လက်ချောင်းကြားထဲက အသာ ချောင်းကြည့်တာမျိုးတော့ မလုပ်နဲ့နော်။း-)
Anonymous (September 21, 2010 11:40 AM).......... ချေးပန်းသလို အရေးကြမ်းနေတဲ့အတွက် ဘယ်တော့ ခွေးဖမ်းတာကို ခံရမလဲမသိ။ မဟုတ်တရုတ် မပါ ပါဘူးဗျာ။ မဟုတ်ဗမာ အကြောင်းလောက်ပဲ ရေးတာပါ။ အိမ်နီးချင်းပေါက်ဖော်ကြီးတွေကို ဝေဖန်ရဲပါဘူး။
green fingers ........... ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါသဗျိုး။
Anonymous ( September 21, 2010 12:21 PM ).......... သြော်... သူလည်းလေ လောကီသားပေမို့ ကြည့်ချင်လှ ရှာရော့မယ်လို့ သဘောထားရမှာပေါ့ဂျာ။
အိမ့်ချမ်းမြေ့..... လာရောက်ချီးမြှင့်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ အိမ့်ချမ်းမြေ့ဆီလည်း ယခင်ကတည်းက မကြာမကြာ ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။
မောင်လေး..... စိတ်ထိန်း၊ မောင်လေး။ စိတ်ထိန်း။ တလွဲအသုံးမချရဘူးလို့ မမ ပြောထားတယ်မို့လား။
Gyidaw...... ဝိုးတဝါးမြင်ရတယ်ဆိုရင်တော့ မခင်ဦးမေရဲ့လက်ရာ ဓါတ်ပုံတွေကို မြင်နေတာ ဖြစ်မှာပါဗျ။း-)
ချစ်ကြည်အေး..... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျာ။ အမှန်တရားတို့ရဲ့ ဆုံမှတ်က လာတဲ့လူဆိုတော့လည်း သဘောကျပေမပေါ့။း-)
Anonymous (September 21, 2010 10:28 PM )..... ဦးပုညရဲ့ ပြဇာတ်ထဲက စကားလေးကို သတိရလို့ သုံးလိုက်တာပါ။ “မုန့်တီဟင်းကဲ့သို့ ကွင်းကွင်းကြီးမြင်လာပြီ” ဆိုတာလေ။ ဝိဇယပြဇာတ်ထဲမှာ ထင်တယ်။
သခင်ကြီးဇော်မျိုး....(သို့မဟုတ်) သခိုးကြီး ဇော်မျင် .......... စိတ်မရှိနဲ့နော်။ ကျနော်ကတော့ ကိုဇော်မျိုးဆို နာမည်မြင်တာနဲ့ ကျော်ဖတ်ပြီးသားပဲ။း-)
ဦးပေါ တုံ့ပြန်ချက်က လန်ထွက်နေတာပဲ။ ဟိဟိ။ အဲလောက်အထား ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိတာ လေးစားပါတယ်။ နာမည်ကြီးဘလော့သမား တစ်ယောက်ရဲ့ အကျိုးအကြောင်းနဲ့ ရှင်းလင်းပုံကို သမိုင်းမှာ မှတ်တမ်းတင်ရမယ်။ ကျုပ်လဲအများနည်းတူ ရေလိုက်ငါးလိုက် အတင်းအဖျင်းပြောရင်း ၂၂နှစ်ကျော် ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ လမ်းစဉ်ကို ထိမ်းသိမ်းဖို့ လက်ခံလိုက်ပါပြီ။ အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်နဲ့ တိုင်းပြည်မတည်ဆောက်ပဲ.. . . မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်နဲ့ . . . အတင်းနဲ့အဖျင်းကို အသုံးပြုပြီး … နိုင်ငံသစ်ကို ထူထောင်ပါမည်။ မတရားမှုတွေ … မမျှတမှုတွေကို ဘာမှမလုပ်ပဲ ဘေးကနေ လက်ပိုက်ကြည့်တဲ့ စိတ်ထားကိုလဲ မွေးလိုက်ပါပြီ။ ဒန်..ဒန်..ဒန်။
ဖိုးသူတော်ဦးပေါ - - -
ကွင်းကွင်းကြီးဆိုတော့ - - -
ဘာကြီးလဲဗျာ - - -
Actually, it is right what Zaw Myo said . I dont know him.But I am reading what he wrote in his blog. I like his idea. But most of the people dont accept.
I am also "Maharbamawardi" and I am proud of being Myanmar. By seeing Myanmar Demo and young & old generation of Military , i really disappoint and feel Myanmar People are lousy. They are just fighting each other , saying gossip and dont dare to do right things.That is why Myanmar is now behind the all asian countries.
P.S I am also one of lousy Myanmar
ဒီမိုရော ၊ နအဖကိုပါ ဝေဖန်တဲ့ ကိုဇော်မျိုးရဲ့ ကွန်မန်.တွေကို ရဲရဲကြီးဖတ်လိုက်ပါ ကောင်းတယ်ကြီးပဲပြောနေတဲ့ကွန်မန်.တွေကြားထဲမှာ ဝေဖန်တဲ့ကိုဇော်မျိုး ကွန်မန်.လေး ကတော့ ဖတ်လို.ကောင်းသား
ကိုကိုစန်း..... ပြန်ပေါ်လာသေးသကိုး။း-)
ကိုပေါကို လွမ်းလို့....